सेक्स गुरु ओशोको प्रेम कहानी, - Khabar of Nepal
सेक्स गुरु ओशोको प्रेम कहानी,
सेक्स गुरु भनिने ओशोका चेला ह्युग मिल्ल थिए । प्रेम र दयामा आधारित समाजमा उनको सपना तासको पत्ता जस्तै बिग्रियो । अनलाइन प्लेटर्फम नेटफि्लक्सले ओशमा आधारित ‘वाइल्ड वाइल्ड काउन्ट्री’ शीर्षकमा एक बृत्तचित्र शृखला बनाएको छ । उक्त शृंखलामा रजनीशको आश्रममा भारतदेखि अमेरिका स्थान्तरण भएको देखाइएको छ । अमेरिकाको ओरेगन प्रान्तमा ६४ हजार एकड जमिनमा रजनीशका हजारौं समर्थकको एक आश्रम स्थापित गरिएको थियो ।
त्यहाँ पाँच बर्षसम्म आश्रममा बस्नेहरुसँग तनाव, कानुनी विवाद, हत्या प्रयासको घटना, चुनावी धोखाधडी, हतियारको तस्करी, विष दिएको आरोप जस्ता कुरा आइरह्यो । विषपान गराउने प्रयासको विषय त अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘बायो टेरर’ अट्याक मानिएको छ ।
ह्यग जुनबेला रजनीशसँग थिए, त्यो आश्रम विस्तारको समय थियो । रजनीशको समर्थको संख्या यसबीचमा २० देखि २० हजार हुँदै थियो । ह्युग भन्छन्, ति २० हजार केवल म्यागजिन खरिद गर्ने मानिस थिएनन् । यिनीहरु ति व्यक्ति थिए, जसले रजनीशका लागि घर-परिवार छाडेका थिए ।’ उनका अनुसार उनीहरु हप्तामा कुनै ६० देखि ८० घण्टा काम गर्थे । छात्रवासमा बस्थे । रजनीशप्रति उनीहरुको समर्पण यो हदसम्म थियो ।
सन् १९७३ मा अस्टियोपेथी -मांसपेशी र हड्डी सम्बन्धी मेडिकल साइन्स)को तालिम पुरा गरी ह्यग भारत पुगेका थिए । त्यसबेला उनको उमेर २५ बर्षको थियो । रजनीशको प्रवचन अडियो क्यासेटमा सुनेर उनी प्रभावित भएका थिए । उनी भन्छन्, जब तपाईं कुने प्रभावशाली व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ, उसको आफ्नो अस्तित्वमा गहिरो असर पर्छ ।’ ह्युग स्वामी शिवमूर्तिको नाम सुनेर भारत गएका थिए ।
ह्युग भन्छन्, मलाई लाग्यो कि, उनी कति अद्भुत, समझदार, दयालु, प्यारो, चैतन्यशील व्यक्ति हुन् । म उनको चरणमा पर्न चाहन्थें । उनीबाट सिक्न चाहन्थे ं ।’ ह्यगले भगवान रजनीशको बारेमा ‘द गड द्याट फेल’ टाइटलको एक किताब प्रकाशित गरेका छन् । ह्यग भन्छन्, ‘मैंले उसलाई बेहद जागृत व्यक्तिको रुपमा देखे, जसमा असाधारण ज्ञान र बोधको भाव थियो ।
ह्यगले भनेका छन्, आमने-सामने भेटमा रजनीशले पूर्ण रुपपले मनको कुरा र भविष्यको बारेमा बताइदिन्थे ।’ यसरी आमने-सामने भेट्नुलाई रजनीशको आश्रममा ‘दर्शन’ भनिन्थ्यो । त्यसबेला ह्यगलाई भारतको जिन्दगी त्यती रसपूर्ण लागिरहेको थिएन । उनी दुखित थिए ।
ह्युगको उमेर त्यसबेला ४० बर्षभन्दा केही बढी भएको थियो । उनी भन्छन् कि, रजनीश बिहानको चार बजे आफ्ना महिला शिष्यलाई ‘विशेष दर्शन’ दिन्थे । ‘रजनीशलाई केही हदसम्म सेक्स गुरु यसकारण भनियो कि, उनी आफ्नो सार्वजनिक प्रवचनमा सेक्स र अर्गाज्मको बारेमा बोल्थे’ ह्यग भन्छन्, ‘यो कुरा त सबैलाई थाहा थियो कि उनी आफ्ना महिला शिष्यसँग रात बिताउँथे ।
यावत् कारणले ह्यगलाई रजनीशप्रति ईष्र्या जाग्यो । उनमा आश्रम छाड्ने मनस्थिती बन्न थाल्यो । तर, उनको भित्री मनले भन्थ्यो, यो केही न केही राम्रोकै लागि भइरहेको छ ।
ह्युग भन्छन्, ‘मलाई थाहा थियो कि, ऊ सेक्स गुरु हुन् । हुन त हामी सबैलाई सेक्सका लागि स्वतन्त्रता थियो । एकै पार्टनरसँग चित्त बुझाउने त्यहाँ एकदमै कम थिए । सन् १९७३ मा यो अलग कुरा थियो । रजनीशको विशेष दर्शनपछि उनको गलफ्रेन्डसंग उनको सम्बन्ध एउटा मोडमा पुगेको थियो । तर, यो धेरै दिन टिक्न पाएन । किनभने रजनीशले उनलाई चार सय मिल टाढा पठाइदियो ।
जब ह्यग फर्किएर आए, तब रजनीशको निजी सचिव मा योग लक्ष्मीको बडी गार्ड बनाइदिए । दर्शनको मौका नमिलेपछि एक शिष्याले मा योग लक्ष्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि लक्ष्मीले उनलाई बडीगार्ड बनाएका थिए । ह्युगलाई रजनीशको पनि सुरक्षा गर्न भनिएको थियो ।
यस घटनापछि शीला ह्यगसँग उस्तै रहिनन् । पुरै बद्लिइन् । उनको लागि अप्ठ्यारो स्थिती पैदा भयो । आश्रममा शीलाको कद यति रफ्तारमा बढ्यो कि, उनी लक्ष्मीको स्थानमा रजनीशको निजी सचिव बनिन् ।
रजनीशका शिष्य दाबी गर्छन् कि उनीहरुलाई स्थानिय अधिकारीले दुख दिए र उनीहरु कन्जर्भेटिभ प्रशासनबाट प्रताडित भए । ह्यगका अनुसार आश्रमको लागि यी सबै समस्या स्वयम् आश्रमकै शिष्यले पैदा गरिरहेका थिए । किनभने उनीहरुलाई स्थानिय कानुनको परर्वाह थिएन ।
अनुसार सन् १९८२ अपि्रलमा आश्रमको गतिविधिमाथि शंका बढ्न थाल्यो । ओरेगन आश्रमको हेल्थ सेन्टरमा अस्टियोपेथीको हैसियतमा काम गरिरहेका ह्यग भन्छन्, अब यो आश्रम प्रेम, दयामाय र ध्यान गर्ने स्थान बनिरहेको थिएन । जुन सन्यासी यस आश्रम स्थापना गर्नका लागि हप्तामा ८० देखि १ सय घण्टासम्म काम गरिरहेका थिए, उनीहरु बिमार हुन थालेका थिए । ह्यगका अनुसार शीलाले यी बिमारी सन्यासीलाई उपचारको लागि जुन निर्देशन गरेकी थिइन्, त्यो एकदमै अमानविय थियो ।
शीलाले भनिन् कि, यी सन्यासीलाई एक इन्जेक्सन दिएर काममा फिर्ता पठाइदिनु । अर्का पटक ह्यगका एक साथी नौका दुर्घटनाको शिकार भए । तर, उनलाई आफ्ना साथी हेर्नका लागि अनुमति दिइएन । काममा र्फकन भन्यो । हामी राक्षसमा बदलिदै थियौं ह्यगले भनेका छन्, ‘मैले आफैलाईं सोधें कि, अब म यहाँ किन बस्ने ?
ह्यगले नोभेम्बर १९८२ मा आश्रम छाडिदिए । उनले भने, ‘केही समयका लागि लाग्यो कि म खाली भएँ । म धेरै भ्रममा थिए । मैले आफैलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइन । सामान्य जिन्दगीमा र्फकनका लागि ह्यगले एक अस्पतालमा ६ हप्ता बसेर परामर्श लिनुपर्ने अवस्था आयो ।
ह्यगले एडिनबरामा केही समयसम्म अस्तियोपेथीको रुपमा काम गरे र लन्डन, म्युनिख अनि फेरी त्यहाँबाट क्यालिफोर्निया फर्किए । सन् १९८५ देखि ह्यग क्यालिफोर्नियामै बसिरहेका छन् । ह्यगले वृत्तचित्रमा देखाइएको कुरा उनले ओरेगन छाडेपछिको बताएका छन् ।
शीलाको गतिविधिको बारेमा ह्यगलाई पुरा जानकारी छैन । तर शीला जे गरिरहेकी थिइन्, त्यसको बारेमा ओशोलाई सबैकुरा थाहा थियो ? ह्यग जवाफ दिन्छन्, त्यसमा मलाई कुनै शंका छैन । ओशोलाई सबैकुरा थाहा थियो ।